Cielomoto, ala ọma jijiji na ikuku Gịnị ka ha bụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
Cielomoto, ala ọma jijiji na ikuku
Monica sanchez | | Ihe gbasara ihu igwe, Foto
Foto sitere na aliforniamedios.com
Ala ọma jijiji amaworị iju onye ọ bụla nọ na mpaghara ahụ, mana ndị na-eme na mbara igwe bụ ihe ịtụnanya karịa. Ma ọ bụ, chee na ị na-eje ije nwayọ, wee bido ịhụ ihe dị iche. Na nke ahụ, ị ​​lere anya n’elu igwe ma hụ ihe dị ịtụnanya, nke na-akpata na-eme mkpọtụ, ọ pụkwara ịkpata ịma jijiji. Ekpetie fi didie ke idem?
Na onu mara site na aha igwe igwe igwe, Skyquake ma obu Skyquake. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe ọhụrụ, ndị ọkà mmụta sayensị enwebeghị ike ịkọwa nkọwa ezi uche dị na ya banyere otu esi adị na ihe kpatara ya.
Eluigwe enwere ike ịmepụta ebe ọ bụla n'ụwa, ma na United States, South America na Australia ha bụ ndị ikpeazụ hụrụ ya. Mụ amaala na-ehi ụra n'udo, na onye malitere ịnụ na mberede nke mere ka windo windo mara jijiji. Onye ọ bụla nwere ike iche na ọ bụ mmalite nke Amagedọn ma ọ bụ njedebe nke ụwa. N'ezie, ọ bụ ihe mmadụ na-ahụkarị ka ha dee ihe ha na-ekwu gbasara ya na ntanetị. Ma nke bụ́ eziokwu bụ na onweghi ihe gha eche.
1 Gịnị Na-akpata Igwe?
2 Ọ dị ọhụrụ?
3 Okwu ama nke cielomotos
Gịnị Na-akpata Igwe?
Dị ka anyị kwuru, ọ nweghị otu echiche ga-akọwa ihe ịtụnanya ahụ. Ugbu a, ọ bụrụ na i bi ma ọ bụ ibi na mpaghara ụsọ osimiri oge ụfọdụ, eleghị anya ị nụla ebili mmiri ahụ ka ọ na-adakwasị ugwu ahụ. Ọfọn, ọ gbanwere na mkpọtụ dị ike ọ na-ewe nwere ike ịbụ n'ihi methane nke kristal si na ala nke oke osimiri ahụ wepụtara. Na oku, nke a bụ gas nke nwere ike ịmepụta oke mbigbọ.
Na-eso ebili mmiri ahụ, ndị na-egwu mmiri na-ekwukarị nke ahụ ha anụwo oké mkpọtụ mgbe ị na-egwu egwuregwu a. Ọbụna tsunam nwere ike isoro ụda a dị ịtụnanya.
Echiche ndị ọzọ na-egosi na enwere ike ịmepụta mbara igwe site na:
supersonic ugbo elu na-agbaji ihe mgbochi ụda
un meteorite nke gbawara na ikuku
Kaosiladị, echiche ndị a niile enweghị ike igosipụta. Ọ bụ eziokwu na ikuku-ahụhụ na-eme na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri, mana ha adịghị etolite ebe ahụ; N’aka nke ọzọ, ndị ọkachamara n’ọdụ ụgbọ elu na-ekwenyeghị na ụda igwe yiri nke ụgbọ elu ndị ahụ e kwuru n’elu. Na, n'ihe banyere meteorites, nkume ndị a na-abịa site na mbara igwe mgbe ha banyere na mbara igwe na-ahapụ ọkụ ọkụ, nke ga-enwu gbaa karịa. Eluigwe anaghị enye ụdị ọkụ ọ bụla.
Yabụ, nkọwa sayensị kachasị anabata ebe niile bụ nke ahụ na-ekwu mgbe oyi akwa ikuku na-ekpo ọkụ na oyi na-efekọtara onwe ha ọ bụla ha na-emepụta mgbawa, si otú a na-eme ka ụda nke, n'ezie, ị gaghị echefu ngwa ngwa. Nke ukwuu, na ọ bụkarịrị ndị mmadụ ịchọ nlekọta ahụike n'ihi oke isi ọwụwa, afọ iwe ma ọ bụ obere nsogbu ndị ọzọ.
Ọ dị ọhụrụ?
Foto si na supercurioso.com
Ọ dị obere, mana mba, ọ bụghị ọhụụ ọhụrụ. Ọ ga-abụ ihe akaebe na ha adị kemgbe ọnwa nke Abụọ 1829. N'oge ahụ, otu ìgwè ndị bi na New South Wales (n'Australia) dere n'akwụkwọ njem ha: 'N'ihe dị ka elekere atọ nke ehihie, mụ na Maazị Hume na-ede akwụkwọ ozi n'ala. Bọchị ahụ dị mma n'ụzọ dị ịtụnanya, na-enweghị igwe ojii na mbara igwe ma ọ bụ ikuku nta. Na mberede, anyị nụrụ ihe yiri ka ogbunigwe nke ogbunigwe nke dị kilomita ise ruo isii. Ọ bụghị ụda dị egwu nke mgbawa nke ala, ma ọ bụ ụda nke osisi na-ada ada mepụtara, kama ihe a ma ama na ngwa agha. (…) Otu n'ime ụmụ nwoke ahụ rigoro ozugbo n'elu osisi, mana enweghị ike ịhụ ihe ọ bụla na nkịtị.
Na mpaghara ọ bụla a hụtụrụla ya. Dịka ọmụmaatụ, na Ireland, ha na-adịkarị, yabụ anyị na-ekwu maka ihe dị adị n'ezie, mana nke anyị na-amatabeghị banyere ya. N’afọ ndị 70, mbara igwe ghọrọ nsogbu siri ike nye United States nke na Onye isi ala Jimmy Carter nyere iwu ka a nyocha gọọmentị n'okwu a. N’ụzọ dị mwute, ọ chọpụtaghị mmalite igwe.
Okwu ama nke cielomotos
Na mgbakwunye na ndị a kpọtụrụ aha, enwere okwu ndi ozo ama ama:
Afọ ole na ole gara aga, na 2010, a kọọrọ ọgba tum tum igwe na Uruguay. Kpọmkwem, ọ bụ na February 15 na 5 nke ụtụtụ (oge GMT). O butere, na mgbakwunye na mkpọtụ ahụ, ịma jijiji n’obodo ahụ.
Na 20 October 2006, obodo ndị dị n’etiti Cornwall na Devon, UK, kwuru na “mgbawa dị egwu” emebila ụlọ.
Na Jenụwarị 12, 2004, otu n’ime ihe ndị a mere ka Dover (Delaware) maa jijiji.
Na February 9, 1994, otu onye nwere mmetụta na Pittsburgh (United States).
Ebe ọ bụ na enweghị ike ịchọpụta ha n'oge a, anyị ga-achọpụta nwee ndidi chere ka ihu mgbe na ebe nke ozo ga-aputa. Knowsnye maara, ma eleghị anya ọ ga-eme nso karịa ka ị chere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Foto » Cielomoto, ala ọma jijiji na ikuku
N’abalị ụnyaahụ, nke ahụ bụ ... Machị 23, 2016, n’elekere 23.30:2010 nke ụtụtụ oge Uruguay, n’obodo Montevideo, kpọm kwem otu agbataobi akpọrọ Santa Catalina, nke dịdebere ugwu Montevideo, ihe ọghọm igwe mere. Aghọtara m na ọ mere, na 2011, XNUMX na ugbu a n'oge a. Ndị agbata obi nụrụ ụda ahụ dị egwu, ma nwee mmetụta na ụlọ ha na-ama jijiji, ha chere maka otu ụlọ ọrụ nhazi nke dị nso ... mana ọ naghị arụ ọrụ.
Zaghachi Lourdes Beatriz Cabrera Mendez
Angela Maria Ortiz na -bụ mmadu dijo
N’isi ụtụtụ Machị 30, 2016. Na Buenaventura - Valle del Cauca. Enwere ihe soro oke mmiri ozuzo, ike na mbibi na mpụga nke ụlọ ahụ. Enwetụbeghị m ụdị ihe a. Ọ dị ka ịnọ n'etiti etiti oke mmiri. Noisezụ gabiga ókè
Zaghachi Angela Maria Ortiz
7:54 nke ụtụtụ Tuzdee June 14, 2016 Pacasmayo - Peru. na-ada oké ụda, dị ka a ga-asị na ụgbọala na-atụfu mmiri na-atụba okwute, windo nke ụlọ ndị ahụ na-ada, ihe niile dị oke ngwa ngwa mana n'ezie karịa mmadụ nwere ụjọ.
Zaghachi Cristián montenegro
Ternyaahụ, Nọvemba 24, 2016, ọzọ ala ọma jijiji chere na ngalaba abụọ nke Uruguay ihe ruru. Na 21: 00 pm na Canelones na Montevideo ha na-ekwu na ọ dị ka nnukwu mgbawa na-enwusi ọkụ, a na-ahụkarị ihe ndị a na gburugburu.
Anụrụ abalị abụọ na Córdoba Veracruz Jenụwarị 19 na 20, 2017
Zaghachi Mohesa Hernández
Ternyaahụ, August 17, 2017, n'ihe dị ka 08:30, na mpaghara Araucania. Chile, ihe omuma nwere njirimara yiri ya.
Zaghachi Liliana Leiva Jorquera
Na-akpali mmasị, a ga-amụrịrị ihe gbasara mbara igwe nke ọma
Zaghachi santiago atenas moreno
Aki, na steeti Puebla, Tlapanala, hụrụ igwe ihu igwe na Jenụwarị 5, 2018 mgbe chi bọrọ na Jenụwarị 6
Ihe omume a mere taa, Tọzdee, 27 Febụwarị, 2020 na 02, n'obodo Bahía de Caráquez, na Ecuador.
A nụrụ ụda dị ike na mbara igwe, dị ka à ga-asị na mgbawa agbawapụrụ, na agbanyeghị na-ahụghị mmegharị ọ bụla na ala (nke mere ka anyị nwee obi iru ala ala ọma jijiji), windo na ọnụ ụzọ na-ama jijiji.
Kedu ka oke aja na uzuzu si eme?